युके आगमनको मेरो दस दिन
हुमबहादुर गुरुङ -
पत्तो थिएन, समय बितेको, युके आगमनको दस दिन पुगिसकेछ । हुन त प्रवेशाज्ञा निकै सकसका साथ प्राप्त भएर पनि होला । नेपाली मेला २०१७ अगस्ट २७ र फोनिज युकेको दोस्रो अधिवेशन अगस्ट २८ मा थियो । अन्तिम समय अगस्ट २४ मा भिसा प्राप्त भो, अरु चारजना साथीहरुको भने हप्तादिन अघि नै भिसा लागेकाले २५ अगस्टमा युके प्रस्थानका लागि टिकट लिइसकेको अवस्था थियो, मेरो टिकट होल्डमा राखिएको थियो । भिसा प्राप्तपछि हतार हतार २५ अगस्ट युकेका लागि उडान भो ।
२५ अगस्ट राति करिब ११ बजे हामी हिथ्रो विमानस्थलमा एभरेष्ट टाइम्स, तमधिं. युके, फोनिज युकेलगायतको संस्थागत भव्य स्वागतले हर्षित थियौं । विमानस्थलबाट हामीलाई भिन्दाभिन्दै गाडीमा राखेर बसोवासको प्रबन्ध गरिएको स्थानतर्फ लगियो । मलाई तमुधिं युकेका अध्यक्ष दाइ ज्ञाम गुरुङ र आमा समूहकी अध्यक्ष भाउजु प्रेमा गुरुङसँगै अल्डरसट भाइ लालकाजी गुरुङको घर पुग्यौं ।
युके आगमनको दोश्रो दिन विहानै लालकाजी भाईको सासु फुपुबाट स्वागत र सम्मान पाउदा प्रफुल्लित हुदै विएफबिएस रेडियोमा अन्र्तवार्ताको लागि विहान दश बजे पुग्यौं, फोनिज नेपालका अध्यक्ष डण्ड गुरुङ, सचिव मनोज घर्ती मगर, रोशनी बैनी र म । सोनाम दाईको अत्यन्तै आकर्षक कार्यक्रम संचालन शैलीले लोभ्यायो, हामीले आफ्ना पत्रकारिताको अनुभव र युके आगमन श्रोता समक्ष प्रस्तुत हुने अवसरका मिल्यो । कार्यक्रम सम्पन्न पश्चात २७ अगष्टमा हुने नेपाली मेला स्थल केम्पटाउन पार्कमा पुगेर तयारी अवलोकन साथै धेरै अग्रज र साथीभाईहरुसँग भेटघाटको मौका जुर्यो ।
तेश्रो दिन नेपालको मौलिक सँस्कृति प्रस्तुति सहित नेपाली पहिचानलाई विश्वसामु परिचय दिलाउन नवौं संस्करणको नेपाली मेला सम्पन्न भयो । मेलामा प्रस्तुत सँस्कृति, उपस्थिती र आत्मीयपनले नेपालीहरुको एकता झल्काइरहेको थियो । नेपालमा लोप हुदै गएका सँस्कृतिहरु नेपाली मेला मार्फत तमु धिं युकेले संरक्षण र प्रचारप्रसार गरिरहेको अनुभुति भयो । नेपाली राजदुत डा. दुर्गाबहादुर सुवेदीको प्रमुख आतिथ्यता र एनआरएन अन्तरराष्ट्रिय अध्यक्ष शेष घलेको विशेष आतिथ्यतामा भएको कार्यक्रममा युवाहरुको विशेष प्रस्तुति रहेको थियो । कार्यक्रममा सगरमाथा आरोही, एभरेष्ट म्याराथन धावकहरुसहित मनको बाबरी चलचित्रका निर्माता एवम नायिका एन्सर्ज गुरुङलाई सम्मानले मेला थप गर्विलो बनेको थियो । तर मेलामा नेपाली राजदुतले विगतमा भएका केही प्रतिवद्धता जो उहाँले व्यक्त गर्नु भएको थियो वाचा पुरा नगरेको गुनासो पनि सुनिन्थ्यो । समग्रतामा मेलाले नेपाल मन र नेपालीपनलाई अन्र्तराष्ट्रियकरण र एकता बनाएको थियो । उक्त दिन बेलुका सहारा युकेले हाम्रा निम्ती आयोजना गरिएको स्वागत कार्यक्रमका सहभागी भयौं ।
अगष्ट २८ मा अल्डरसटको एम्पायर हलमा आयोजित फोनिज युकेको दोश्रो अधिवेशनमा सहभागी बन्यौं । अधिवेशनले अत्यन्तै क्रियाशील प्रमिला राईको नेतृत्वमा सर्वसम्मत कार्यसमिति गठन भयो, बधाई र शुभकामना ज्ञापन गर्दै विदा भयौं । कार्यक्रममा हामी सँगै नेपालबाट आएका साथी गणेश राईद्धारा लिखित पुस्तकको पनि विमोचन गरियो । अधिवेशन लगतै तमु धिं युकेद्धारा आयोजित स्वागत कार्यक्रममा सहभागीता र बुद्धिष्ट कम्युनिटी सेण्टर युकेको स्वागत एवम आशिर्वाद ग्रहण गर्ने अवसर मिल्यो । उक्त कार्यक्रम सम्पन्न पश्चात विसिसिका अध्यक्ष नारायण प्रसाद गुरुङ बिइएमले मलाई लण्डनस्थित बैनी तारा र सोल्टी बेनको घरमा पुर्याउनु भयो ।
युके आगमनको पाँचौ दिन बैनी तारा र भान्जा विनोदले राजधानी लण्डन भ्रमण गराउनु भयो । थेम्स नदिमा सयर, लण्डन टावर, लण्डन ब्रिज, ब्रिज टावर, बकिघम प्यालेस लगायतमा ऐतिहासिक र पर्यटकीय स्थलहरुको भ्रमणले मन युकेमय बनिरहयो । व्यस्त समयमा पनि बिदा लिएर सोल्टी बेन र बैनी ताराले अगष्ट तीसमा लण्डन बजार घुमाउदै बेलुका फार्नबरोस्थित संजीव भाईको घरमा आइपुगेको थिए ।
अगष्ट एकतिस तारेखमा एभरेष्ट टाइम्सका डाइरेक्टर दुत पुन र मधुकरदाईले बेलायतको पुरानो राजधानी विनचेष्टरस्थित गोर्खा संग्रहालयको भ्रमणले बेलायतका लागि गोर्खाहरुले देखाएको बीरता अवलोकन गर्ने अवसर मिल्यो । संग्रहालय भ्रमणकै क्रममा सात वर्ष अघिका विग आइकन गायक भाइ पनि भेटिदा अत्यन्तै खुशी लाग्यो । संग्रहालय अवलोकन पश्चात स्टोनहेगको योजना मोडिदै बर्नमाउथस्थित डुडल डोरमा पुग्दा चलचित्र र पोष्टकार्डमा देखिदै आएको अत्यन्तै रमणीय स्थलको रसस्वादन गर्न पायौं । समुद्री किनारमा रमायौं । जादै गर्दा पोखराको वर्षालाई विर्साउने मुसलधारे पानी डुडल डोर नपुग्दै घमाइलोमा परिणत भो । दिनभर रमायौं । बेलुका फर्केर न्युवेरी दुत दाइको निवासीमा दाइ भाइजु छोरीहरुको आत्मीय स्वागतले मख्खीयौं ।
सेप्टेम्बर १ मा तमु चौतारी युकेद्धारा हाम्रो स्वागतसहित अन्र्तक्रिया कार्यक्रममा सहभागी भयौं । तमु समुदायको एकता, तमुवान पहिचान र अधिकारको अभियानका लागि अत्यन्तै महत्वपूर्ण कार्यक्रम भव्य रुपमा सम्पन्न भयो । ले.चन्द्रबहादुर गुरुङको अध्यक्षता, कार्यक्रम संयोजक इन्द्र घोतानेको स्वागत र युवन गुरुङ र नविना गुरुङले संचालन गर्नुभएको कार्यक्रममा फोनिज सचिव मनोज घर्तीमगर, अध्यक्ष डण्ड गुरुङ र स्थानीय निर्वाचनमा पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका मेयरका उमेरदार हुमबहादुर गुरुङले विचार व्यक्त गर्नुभएको थियो । मेयरका उमेदवार गुरुङ निर्वाचनको समिक्षा, तमुवान प्रदेश केहो र किन, तमु एकता र मुलुक कसरी अघि बढ्न सक्छ भन्ने बारेमा प्रष्ट विचार प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । कार्यक्रमका युकेस्थित तमु सम्पूर्ण तमु संघ संस्थाका अगुवाहरुको बृहत सहभागीता र उहाँले राखेको जिज्ञासा मेयरका उमेदवार हुमबहादुर गुरुङले पुन प्रष्टयाउनु भएको थियो । तमु चौतारी बास्तवमा तमुको अधिकार र एकताका बारेमा मन्थन गर्ने मंच बनेकोमा सबैको तर्फबाट पं्रसंसा भएको थियो । उक्त कार्यक्रममा तीस वर्ष पछि आफनै भान्जासँग भेट हुँदा चौतारी भेटघाटको थलो समेत बनेको प्रमाणित भएको महसुस गरें । कार्यक्रम लगत्तै दाई दुर्गाको घर बेजिङस्टोक पुगे । दाइको घर पुग्न युकेमा ८ दिन लाग्दा म आफै कति व्यस्त भएछु मनमनै सोचें ।
युके आगमनको नवौं दिन लण्डन स्वायन्लीस्थित गाउकै दिदिको घरमा आयोजित भेटघाट र स्वागत कार्यक्रममा गाँउले दाजुभाई दिदिबहिनीको हार्दिकले समय वितेको थाहै भएन । उक्त यात्रामा साथ दिनु हुने भाई नर, बैनी अप्सरा र कान्छु प्रति आभारी छु ।
यात्राको दशौं दिन बेजिङस्टोकबाट दाई दुर्गा भाउजु तारा, बैनी अमृता र काका सर्वराज फानहामस्थित क्या.तोरणबहादुर काकाको छोरा अनिल र बुहारीको पहिलो छोराको जन्मेको खुशीयालीमा चारभन्ज्याङ तमु समाज आमा समितिद्धारा बधाइ तथा आशिर्वाद प्रदान कार्यक्रमको भेटघाटले युके होइन गाउमा नै पुरयाएको थियो मलाई । उक्त कार्यक्रममा नेपाल फकन लाग्नु भएको काका र काकीलार्य समेत विदाई तथा शुभयात्रा कामना गरिएको थियो । उक्त कार्यक्रम सम्पन्न सँगै अल्डरसट माइतीघरमा आयोजित आफ्नै समाज चारभन्ज्याङको आतिथ्यता, स्वागत र सम्मानले अत्यन्तै प्रोत्साहन थपेको छ । समाजका लागि, समुदायका निम्ती थप योगदान पुरयाउन भरोसा मिलेको छ । उक्त कार्यक्रम नसकिदै लण्डन ह्यारोमा नेपाली संघीय समाजद्धारा आयोजित कार्यक्रम सहभागी भयौं । नेपाल, नेपाली, पहिचानको आन्दोलन, पत्रकारिताका विविध पक्षमा नेपालबाट आउनु भएका पत्रकारहरुले विचार व्यक्त गर्नु भएको थियो । समाजका अध्यक्ष कमल गुरुङको अध्यक्षता र नरेश काङमाङको संचालनमा भएको कार्यक्रममा संघीय समाजवादी फोरमका बैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य हुमबहादुर गुरुङ युके इन्चार्ज भगवान चाम्लिङ सहितका नेताहरुले पार्टीका गतिविधी बारेमा जानकारी गराउनु भएको थियो ।
युके बसाईको दस दिनमा सिक्नुपर्ने राज्यमा सिस्टम स्थापित गर्नुपर्दछ, नेपाल र नेपालीको लागि विदेशमा रहेका नेपालीहरु योगदान गर्न तयार छन्, व्यस्त समयसँगै हार्दिकताको जति प्रशंसा गरेर पनि पुग्दैन, हामी जहाँ रहे पनि एकताको जरुरी छ भन्ने भावनालाई आत्मसात गरिरहेको छु ।